ကွန်းခိုရာ: July 2011
အရင်ဆုံးဒီပိုစ့်ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးပြောပရစေ။ရွှေဖရုံသီးချက်စားတုံးကပိုနေတဲ့တစိတ်ကို ထပ်ဖြည့်ပြီးလည်းမစားချင်၊လွှင့်လဲမပစ်ရက်တာနဲ. နောက်ဆုံးမုန်.လုပ်စားဖြစ်သွားတာပါ။
ပုဇွန်ခြောက် 20 gm
Posted by Aunty Oo at 22:296comments:
1/2 tbsp ပဲငံပြာရည်အကြည်
1/2 tbsp နှမ်းဆီမွှေး
1/2 tbsp ခရုဆီ
1/2 tsp သကြား
Posted by Aunty Oo at 17:453comments:
ငါးပုဏ္ဏားအိုးကပ်ချက် နှင်. ကြောင်လျှာသီးသုတ်
Posted by Aunty Oo at 23:364comments:
Posted by Aunty Oo at 18:135comments:
ပထမဦးစွာတောင်းပန်ပါရစေ။ဦးဆုံးတင်သောပိုစ့်ဖြစ်သောကြောင့် စာများအပ်ကြောင်း ထပ်နေလျှင် သော်၎င်း၊ အမှားများပါနေခဲ့သော်၎င်း ခွင့်လွှတ်ပါ။အင်္ဂလိပ်စာ ကို မကျွမ်းသလို မြန်မာစာ ကိုလည်း ကောင်းစွာမရိုက်တတ်ပါ။ ဟင်းချက်ဝါသနာပါသောကြောင့် ဟင်းချက်နည်းပါသော ဘလော့်များကိုအမြဲရှာဖွေဖတ်ရှုပါတယ်။
ဝါသနာအရချက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟင်းချက်နည်းလေးတွေကိုမျှဝေပါရစေ။cholestrol များနေတဲ့အတွက်ခုတလော အပေါင်းတွေ၊အပြုတ်တွေဘဲ အစားများနေပါတယ်။ ဆားငံသီးငါးပေါင်း နည်းလေးကိုပြောပြပါရစေ။ ငါးကိုအစိမ်း သို့မဟုတ် အကြော်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ငါးအညှီနံ့ကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့ ငါးကိုမကျက်တကျက်ကြော်ပါ။ ကြိုက်တဲ့ငါးကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။အန်တီ ကတော့ salmon နဲ. seabass(ကက္ကတစ်) ကိုသုံးပါတယ်။
Posted by Aunty Oo at 17:579comments:
အန်တီ ဘလော့် ကို လာရောက် လည်ပတ်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အားလုံး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။
အန်တီကတော့ မိသားစု နှင့် အတူ စင်္ကပူနိုင်ငံ တွင်နေပြီး အချက်အပြုတ် ဝါသနာ ပါတဲ့ အိမ်ရှင်မတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။နေ.တိုင်းနီးပါး ဘလော့် များကိုသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့တာ ၃ နှစ် ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ခုတော့ကိုယ်တိုင် ရေးချင်စိတ်ပေါက်လာတာနဲ. တစ်လုံးချင်းရိုက် ပြီးရေးလိုက်တာပါ။အိမ်ထောင်သက် ၂၇ နှစ်နဲ.အတူ မီးဖိုချောင်သက် အတွေ.အကြုံလေးတွေကို မျှဝေပရစေ။လာရောက် လည်ပတ် အားပေး လှဲ.ပါ လို.ဖိတ်ခေါ် ပါရစေ။
Posted by Aunty Oo at 20:223comments:
ငါးပုဏ္ဏားအိုးကပ်ချက် နှင်. ကြောင်လျှာသီးသုတ်...